Ya bụ nnukwu mmemme bụ nke weere ọnọdụ n'ama egwuregwu Chuba Ikpeazụ dị n'Ọnịsha, ma bụrụkwa nke dọtara ndị na-azụ ahịa sitere n'ahịa iri isii na otu dị na steeti ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ e ji okwu ha agba izu. Ndị otu ahụ nọkwara n'oge ahụ wee kwuputa nkwado ha nye ọchịchị Willie Obianọ, sị na ọ na-eme nke ọma, ma mekwa ka a mara na ha kwụ ya n'azụ n'ịzọ ọchịchị ya nke ugboro abụọ.
N'okwu ya na mmemme ahụ, onyeisi ndị otu ahụ bụ maazị Okwudịlị Ezenwankwọ toro ndụ dike ọgụ ahụ bụ Dim Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu ma sị na ndị Igbo n'ụwa gbaa gburu gburu ga-aga n'ihu n'icheta ya na ịkwanyere ya ugwu ruru ya oge ọbụla.
N'aka nke ọzọ, o ji aha ndị otu ahụ wee too ọchịchị gọvanọ Willie Obianọ maka ọrụ ọma dị iche iche ọ rụpụtagoro, ọ kachasị na ngalaba azụm ahịa na ngalaba niile dị iche iche na steeti ahụ, kemgbe ihe dịka ahọ atọ na ọkara o jiri bata n'ọkwa ọchịchị.
Ọ kpọpụtara ụfọdụ n'ime ihe ndịgọvanọ Obianọ mepụtagoro iji kwalite ọnọdụ azụm ahịa na steeti ahụ, nke gụnyere amụmà inye ahịa ọbụla nde Naịra iri iji wee họrọ ma rụọ ihe ha chọrọ, bụ nke ọ sị na o nyere nnọọ aka n'ụzọ pụrụ iche igbo ụfọdụ ihe iche aka mgba ha na-agabiga n'oge mbụ.
Ka ọ na-agụpụta ozi na nkwekọrịta ndị otu ahụ na mmemme ahụ, ode akwụkwọ izugbe nke otu ahụ n'ala anyị bụ maazị Chukwuma Eluchalụ mere ka a mara na ntụkwasị obi ahụ ha nwere n'ọchịchị Obianọ na nkwado ahụ ha na-akwado ya ịchị nke ugboro abụọ bụ nke kwesiri ekwesi n'ihi ọrụ ọma ya na ịgba na-ada ụda o tigoro na steeti ahụ, kemgbe ahọ atọ na ọkara gara aga.
Na nzaghachi, gọvanọ Obianọ toro ndị ahụ maka ịchịkọba mmemme ahụ nakwa nkwado ahụ ha nyere ya, ma kwe ha nkwa na ya gaghị agharịpụ ha n'ọchịchị ya nke ugboro abụọ. O kwuru na gọọmenti ya ga-ewelitekwu aka n'ego ahụ a ọ na-enye ahịa dị iche iche iji họrọ ma rụọ ihe masịrị ha, ma wetekwa ezi ọnọdụ dị larịị nye azụm ahịa na steeti ahụ, iji kwalite ngalaba ahụ, bụkwa nke ọ sị na ọ ga-enye aka wulite ego na-abata n'akpa gọọmenti steeti ahụ.
Ọ rịọrọ ha ka ha ghara ịla azụ n'ịkwado ya n'ihi na ọchịchị ya ga na-aga n'ihu igboro ha mkpa ha nakwa inye ha nkwado.
A nọrọ na mmemme ahụ wee waa achịchị bekee e mere maka ya bụ ncheta ụbọchị ọmụmụ Dim Ojukwu, ma werekwa otu olu kwee ukwe nkwado dị iche iche nye gọvanọ Wille Obianọ, iji sị ya gaba n'ihu na ha kwụ ya n'azụ.